ရေပူ၊ ရေအေး သုံးရင်း ဓာတ်လိုက်သေဆုံးနိုင်ပါကြောင်း သုံးစွဲသူများအတွက် မျှဝေလိုက်ပါသည်
ကာယကံရှင်​​တွေကိုယ်​စား မခံစားနိုင်​ လွန်းလို့တင်​ပြလိုက်​ပါတယ်​
ဒီဖြစ်​ရပ်​မှာ တာဝန်​အရှိဆုံး ” ချမ်းသာသုခ (အထူးကု​ဆေးရုံအမည်​ခံ)​ဆေးရုံကဘယ်​လို တာဝန်​ယူ တာဝန်​ခံမှာလဲ ”
ကျွန်​​တော့်​မိတ်​​ဆွေရဲ့အ​ဖေ ကျန်းမာေ​ရးမ​​ကောင်းလို့ ချမ်း​သာသုခ​ဆေးရုံမှာ (၂၄-၈-၁၈) ရက်​​နေ့က စပြီး​ဆေးရုံတက်​တယ်​….Special Room မှာအခန်းယူပြီးတက်​တယ်​..အခန်းကျဉ်း လို့ပိုကျယ်​တဲ့အခန်း ကို​ပြောင်းချင်​လို့​ပြော​တော့ အခန်းနံပါတ်​(၁၀၂)ကို စီစဉ်​​ပေးတယ်​ တကယ်​ဆို အဲဒီအခန်းနံပါတ်​(၁၀၂)ရဲ့​ရေချိုးခန်းက ဓါတ်​လိုက်​မှန်း ဝန်​ထမ်းအားလုံးသိတယ်​..(ဒါကိုကာယကံရှင်​​တွေကိုသတိ​ပေး​ပြောကြားခြင်းလုံးဝမရှိဘူး)
ဒါကိုကာယကံရှင်​ဖြစ်​သူ ကျွန်​​တော့်​မိတ်​​ဆွေကမသိ​တော့ ရေဝင်​ချိုးတယ်​ ” အဲဒီမှာ ဓါတ်​လိုက်​တယ်​ / ဓါတ်​လိုက်​ပြီး​လဲကျသွားတယ်​ ​ဒါကို ရေချိုးခန်းအပြင်​မှာရှိတဲ့ လူနာကကြား​တော့ ​ဆေးရုံကတာဝန်​ရှိသူ​တွေကို ဖုန်း(​ဆေးရုံတွင်​အ​ရေး​ပေါ်အ​ခြေ​နေတွင်​သုံးရန်​စဉ်​ထား​သော Ph)နဲ့​ခေါ်တယ်​ ….​​ဆေးရုံတာဝန်​ရှိသူ​တွေ ​ရောက်​မလာဘူး…..လူနာလုပ်​သူက မ​နေနိုင်​​​တော့လို့ (သား​ဇောနဲ့) လည်​ပင်းမှာတပ်​ထားရတဲ့ပိုက်​​တွေကိုဖြုတ်​ပြီး လမ်းကိုကြိုးစား​လျှောက်​ကာ အပြင်​ကိုအကူအညီထွက်​​တောင်းရတယ်​…
ဒါ​တောင်​ချက်​ချင်း​ရောက်​မလာကြဘဲ ​တော်​​တော်​ကြာမှ ည​စောင့်​နဲ့ အမျိုးသမီး ၂ ​ယောက်​​ရောက်​လာတယ်​…. 🙁 ဖြစ်​စဉ်​ကို​ပြောပြ​တော့ ​ရေချိုးခန်း တံခါးကိုဖွင့်​ပြီး လူတစ်​​ယောက်​လုံးကြမ်းပြင်​မှာလဲ​နေတာကို ဘာမှမလုပ်​ဘဲ ​သွားမကိုင်​နဲ့ဓါတ်​လိုက်​လိမ့်​မယ်​​ဆိုပြီး သူတို့အချင်းချင်း​​ပြော​နေကြတယ်​….. 🙁 ဖြစ်​ပုံများ သူတို့ကြ​တော့ ဓါတ်​လိုက်​​သေမှာ ​ကြောက်​တယ်​.. 🙁 ဓါတ်​လိုက်​မှန်းသိရဲ့နဲ့လည်း လူနာနဲ့လူနာရှင်​​တွေကိုသတိမ​ပေးဘူး 🙁
လူနာရှင်​က​​ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဓါတ်​လိုက်​ခံရပြီး ခံစား​နေရတာကို​တောင်​ ပြစ်​ထားပြီး သူတို့ကျ​သေမှာ​ကြောက်​လို့မကိုင်​ရဲဘူး 🙁 တကယ်​ဆိုဖြစ်​ဖြစ်​ခြင်း ဓါတ်​လိုက်​ခံရတဲ့ လူနာရှင်​ကိုကူညီကယ်​ဆယ်​​ပေးမယ်​ဆိုရင်​ တန်​ဖိုးရှိလှတဲ့ လူ့အသက်​တစ်​​ချောင်း အလကားဆုံးရှုံးစရာမလိုဘူး​လေ ….အခု​တော့ … :'( ကျန်းမာသန်​စွမ်းတဲ့လူတစ်​​ယောက်​ရဲ့ :'( အသက်​
တစ်​​ချောင်းအလကားဆုံးရှုံးရတယ်​ :'( ဖြစ်​သင့်​ရဲ့လား ? ဒါတင်​ဘဲလား …..မက​သေးဘူး….
ဆရာဝန်​ကချက်​ချင်းမလာ ….ည​စောင့်​ကိုဘဲ​ဆေးကုခိုင်းရမလို ဒါလားအထူးကု​ဆေးရုံ…. 🙁 ဒါလားလူ့အသက်​ကိုကယ်​တင်​ဖို့အထူးကုအမည်​ခံ ဘာမှပြည့်​စုံမှုမရှိတဲ့အလကား​ဆေးရုံ. 🙁 ​နောက်​လူ​တွေရဲ့တန်​ဖိုးရှိတဲ့အသက်​​တွေထပ်​ပြီးမဆုံးရှုံးနိုင်​​စေဖို့ ဒီလိုအထူးကုအမည်​ခံပြီး ဘာမှ(ဘာတစ်​ခုမှ)ပြည့်​စုံမှုမရှိတဲ့ ဒီလို​ဆေးရုံကို သက်​ဆိုင်​ရာတာဝန်​ရှိသူများမှ အမြန်​စစ်​​ဆေးအ​ရေးယူ​ပေးဖို့ ​တောင်းဆိုအပ်​ပါတယ်​……
ဓါတ်​လိုက်​​နေတဲ့အခန်း​တွေကိုပါ လူ​နာ​တွေကိုမ​ပြောဘဲ သူတို့ပိုက်​ဆံရဖို့တစ်​ခုထဲက်ိုပဲကြည့်​ပြီး​အခန်း ​ငှါးစား​နေတဲ့​ဆေးရုံကို​ဝေး​ဝေးက​ရှောင်​ကြဖို့ လူတစ်​​ယောက်​ရဲ့အသက်​ကိုရင်းပြီး :'( ​စေတနာများစွာဖြင့်​သတိ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ….. :'(
ရေပူရေအေး သုံးရင်း ဓါတ်လိုက်ဆုံးနိုင်ပါကြောင်း
မေမြို့ကအထူးကုဆေးရုံတစ်ခုရဲ့ ရေချိူးခန်းတစ်ခုကရေပူရေအေးစနစ်မှာ ဓ်ါတ်လိုက်ခံရပြီး R-I-T ကျောင်းက မြို့ပြဆရာကြီးတစ်ဦးရဲ့ သားကြီးဖြစ်သူက အဲဒီဆေးရုံတက်နေရတဲ့သူ့ အဖေဖြစ်သူကိုပြုစုဖို့ လူနာစောင့်လုပ်ရင်းကမနေ့ ညက ဆုံးသွားတယ်။ အသက်က ကျနော်တို့ နဲ့ ရွယ်တူ ၄၄လောက်ပဲရှိသေး။
ဗမာပြည်ထုံးစံအတိုင်း ဓ်ါတ်လိုက်လို့ ရုတ်တရက်ဆုံး သွားရင် အာမခံမရှိ အားနာပါးနာနဲ့ နေကြရင်း ဖြစ်တဲ့သူကကံဆိုးလို့ တရားစွဲလည်းရုံးကစားမှာနဲ့အချိန်ကုန်မှာနဲ့ဒီလိုနဲ့ ပဲ မစို့ မပို့ လျော်ကြေးလေးတွေနဲ့ အသက်ကသိန်းဆယ်ဂဏန်းပဲတန်သွားရော။
အဓိကပြောချင်တာက ဟိုတယ်တို့ အထူးကုဆေးရုံ တို့ မှာ အခုလို Exhaust Fan (လေစုတ်ထုတ်ပန်ကာ) ရေပူရေအေးစနစ်တပ်ထားတဲ့ မီးပလပ်ပေါက်တွေက သတ်မှတ်ခံနိင်ရည်မရှိတာကိုသုံးထားတာမျိူး (ဥပမာ -15A သရီးပင်ပလပ်ပေါက် ပင်တံကအလုံးသုံးရမှာကို ပြီးစလွယ် 5A Two-Pin ပလပ် ဒါမှမဟုတ် လေးထောင့်ပင်ထိုးMulti ပလပ်ပေါက်တွေသုံးထားတာမျိုး-)။
အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးစာအတွက် မြေဓာတ်ချတာ(Earthing Resistance ) ရလာဒ် Ohm result ကောင်းမကောင်းမစစ်ဆေးပဲ ဖြစ်သလိုလုပ်နေကြတာ။ ဘယ်သူကမှလည်း မိုးဆိုကောင်း နွေနဲ့ ဆောင်းကျညံ့တတ်တဲ့ ရာသီအလိုက်အနည်းငယ်ပြောင်းတတ်တဲ့ EARTH ကိုမစစ်ဆေးမပြုပြင်ကြပဲ ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာကြတာ။
ဓ်ါတ်လိုက်တာနဲ့ ပြုတ်တဲ့Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) မသုံးကြတာမျိုး။ ဆေးရုံဆောက်ပြီး
Third Party inspection မရှိပဲရသလိုသုံးတာ လစဉ် အပတ်စဉ် ပြင်/ထိန်း (Check -Up Team) မထားပဲ ဓ်ါတ်လိုက်သလိုဖြစ်နေမှ ပြန်ပြင်တာမျိုး။
အဲသလို ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးလည်းသေသောသူကြာရင်မေ့သလို ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကမှ မှတ်တမ်းမှတ်ရာမထားကြတော့ပဲ ဗမာပီပီ ဖြစ် ပျက် မှတ်ရှုပြီး၊ ပြီးပြီးရောလုပ်ကြတာ အဲဒါတွေမျိုးကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ဖို့နည်းဥပဒေ မူဝါဒတွေနဲ့Enforcement မလုပ်နိုင်ကြတာကိုတွေးရင်း
သတိတစ်ချက်မဲ့လို့အသက်တစ်ချောင်းဆုံးတာမဟုတ်တဲ့ ခုလို ဖခင်ကြီးဆေးရုံတက်တာကို ပြုစုရင်း ရေချိုးခန်းလေးတစ်ချက်ဝင်တာနဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းဖွင့်ကျင်ကနဲဖြစ် သတိလစ်အသက်ဆုံးပါးသွားသူ ကိုနေသူရိန် အကြောင်းဖတ်ရင်း သူသေနေ့ စေ့ တယ်လို့ မတွေးပဲ ဆေ့ဖ် (safe) မဖြစ်လို့ သေနေ့ စေ့သွားတာကို ခံပြင်းရင်း မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဘယ်နေရာခဏရောက်ရောက် ရေပူရေအေး သုံးခါနီး safety ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မြွေကိုက်ရင် ဖြေဆေးရှိနိင်တယ် လျှပ်စစ်ကိုက်ရင် ဖြေဆေးမရှိပါဘူး မိတ်ဆွေတို့ ။
ယုတ်စွအဆုံး ထဘီတန်း (လုံချည်တန်း)အဖြစ်သုံးထားတဲ့သွပ်နန်းကြိုးကအစ လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိနေသယောင်ခံစားပြီးသတိကပ်သုံးကြပါ။
Quality ကောင်းတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုနိင်ကြပါစေ။ လျှပ်စစ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးကြီးကြပ်စစ်ဆေးခကုန်ကျစရိတ်တွေနှမျောခြင်းမျိူး ကင်းကြပါစေ။
မှတ်ချက်-Zaw Min Oo Facebook မှကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အောင်မြင်သွားပေမယ့် ဘဝမမေ့တတ်ကြောင်း လက်တွေ့ပြသလိုက်တဲ့ သားငယ်
သက်သေအခိုင်အလုံနဲ့ အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြီး ရှေ့ဆက်တော့မယ့် နှင်းအိရွှေရည်
ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ပထမဆုံးစကားကြောင့် မျက်ရည်တွေပါ ကျခဲ့ရတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး